Maindasitiri Mhinduro |
KT Diesel jenareta
Kuvhiringidzwa kwesimba mumatura enjanji hakusi kungokanganisa chete; ivowo tyisidziro dzakakomba kuutano nokuchengeteka. Kana simba raenda muchiteshi chechitima, iyo moto system, chengetedzo system, telecom system, masystem system, uye data system ichawa. Chiteshi chose chinopinda mune nyonganiso uye kutya ...
Simba Zvirimwa Jenareta Set Kent Simba inopa yakazara simba mhinduro yezvigadzirwa zvemagetsi, kuverengera kuenderera kwesimba remagetsi kana gwenya remagetsi rikamisa kuendesa simba. Midziyo yedu inoiswa nekukurumidza, inosanganiswa zvirinyore, inoshandiswa zvakavimbika uye inopa simba rakawanda. Anoshanda magetsi ...
Kent Power inopa magetsi edhiziri emagetsi ekushandisa muchiuto kusangana nehunyanzvi zvinodiwa zvemasangano epasi rese Simba rinoshanda uye rakavimbika rakakosha kuti uve nechokwadi chekuti dziviriro mission inopedzwa seinobudirira sezvinobvira Magetsi edu anonyanya kushandiswa sesimba remasimba ekunze, ...
Outdoor Projects jenareta Set Kent Power mhinduro yemapurojekiti epanze inova nechokwadi chakanyanya kushanda kwekutsvaga kwemigodhi uye maitiro. Panyaya yekuita, kushanda uye kugadzirisa kwejenareta seti, zvivakwa zvekunze zvine zvinyatso kuomarara pane seti jenareta. Kent Power vane ...
Oiri Minda Simba Solution Kent Simba inopa yakazara portfolio yemasimba ekudzivirira mhinduro kuminda yemafuta. Mafuta negasi kuburitswa kunowanzo kuve munzvimbo dziri kure nenzvimbo dzine vanhu vashoma, uye idzi nharaunda nemagetsi emagetsi anogona kunge ari munjodzi munzvimbo dzakadai ...
Zvipatara jenareta Set Solution Muchipatara, kana basa rakakundikana rikaitika, simba rechimbichimbi rinofanirwa kupihwa kuchengetedza hupenyu uye zvakakomba mitoro yebazi mukati memasekondi mashoma.Saka zvipatara zvine simba rinoda simba. Simba rezvipatara rinobvumira zvachose kusavhiringidzika uye rinofanira kuve p ...
Telecom & Dhata Center
Telecom Power jenareta anonyanya kunyorerwa materevhizheni zviteshi mumafoni efoni. Kazhinji, jenareta anogadza 800KW anodiwa kumatunhu chiteshi, uye jenareta rinoisa 300KW kusvika 400KW anodiwa kuti matunhu neminisiparati, sezvo standby simba kuwedzera Telecom Power Solution Kushandiswa emagetsi ...
Kuvaka kunovhara nzvimbo yemusango, kusanganisira zvivakwa zvemahofisi, masiketi, dzimba dzekugara, mahotera, maresitorendi, nzvimbo dzekutengesa, zvikoro, nezvimwe. Simba risingamiri rinodiwa kuti ushandise makomputa, magetsi, zvishandiso zvemagetsi, maelevator munzvimbo idzi. Zvivakwa jenareta Set Solution Kuvaka Cove ...
Mabhangi jenareta Set Dhiziri jenareta seti anomiririra yakawanda mari kudyara uye kuvimbika kwavo, kunyanya pamberi pekumirira jenareta seti, inonyanya kukosha. Mabhangi ane huwandu hukuru hwemakomputa epamberi uye zvimwe zvigadzirwa, izvo zvinongogona kushanda mu ...
Mining Simba Solution Kazhinji magetsi emagetsi anoshandiswa seyakanyanya magetsi sosi yehupenyu hwezuva nezuva, mainjiniya mune yekuchera saiti. Kent simba mhinduro yemigodhi inovimbisa kushanda kwakanyanya kwekutsvaga kwemigodhi uye maitiro. Isu tinopa akavimbika magetsi masisitimu uye nekukurumidza kuendesa, izvo zvinogona kuwedzera nguva yekupedzisira ...